Khwopa College of Engineering - Event: Futsal Boys' Team Event –2076
तिहार (स्वन्ती नखा: )को बिदा हुनेबारे सूचना !
नि:शुल्क अनलाइन डाटा प्रदान गरिनेबारे सुचना !
दशैं बिदा बारे । सूचना
शुल्क बुझाउने तरिकाबारे सुचना !
eSewa बाट शुल्क बुझाउने बारे सूचना !
कलेजको प्रशासन दैनिक रुपमा सन्चालन हुनेबारे सूचना !
Minor-project Proposal Defense (online) of BCT 2074 Batch
Futsal Boys' Team Event –2076
1st January, 1970 @05:01 AM
Rules and Regulations of the Futsal Competition
फुटसल खेल FIFA अन्तर्गतको Futsal Association को नियम अनुसार खेलाइने छ । तर खेल समयको हकमा भने यो नियम लागु हुने छैन ।
कलेजले मात्र Bips को ब्यवस्था गर्नेछ । जर्सी खेलाडी आफैले ब्यवस्था गर्नु पर्नेछ र futsal जुता अनिवार्र लगाउनु पर्नेछ । football जुता लगाए खेल्न निर्षध छ ।
खेल १०/१० मिनेटको खेलाइनेछ । त्यसमा २ मिनेटको ब्रेक दिइनेछ । जम्मा ब्रेक सहित खेल २२ मिनेटको हुनेछ ।
प्रतियोगिता नकआउट खेलाईनेछ ।
प्रतियोगितामा भाग लिन मिति २०७६ पुष ११ गते दिउसो २ः०० वजे भित्र अनिवार्य नाम दर्ता गराइ सक्नु पर्नेछ ।
खेलमा विवाद भएको खण्डमा निर्णायक कमितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
टिम ईभेन्टमा टिम एउटै Classको हुनु पर्ने छ।
प्रतियोगितामा ७जना खेलाडीको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ । एकै ब्यक्ति २ बटा टिममा नाम दर्ता गर्न पाउने छैन । यदी दर्ता गरेको पाएमा दुबै टिमलाई प्रतियोगितावाट निस्कासित गरिनेछ । त्यो टिमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी टिम Captain को हुनेछ ।
परिचय पत्र विना खेल मैढानमा प्रबेश निषेध हुनेछ ।
प्रतियोगिताको अवधिभर खेलाडीहरुबाट कुनै अभद्र ब्यवहार, भैm–झगडा गरेको पाइएमा तथा प्रतियोगिताको नियमहरुको पालना नगरेको ठहरेमा कलेजको नियमानुसार कार्वाही हुनेछ ।
खेल अवधिमा कोही खेलाडीलाई चोट लागे कलेज ले मैढानमा सामान्य उपचार मात्र गरिदिनेछ ।
प्रतियोगितामा सम्बन्धित विभागकै विद्यार्थीहरु समाबेश गराउनु पर्नेछ ।
प्रतियोगिताको सम्पूर्ण निर्णयकको अधिकार निर्णायक कमितिलाइ हुनेछ । सो समितिको निर्णय पूर्ण स्विकार्य हुनु पर्नेछ ।
If you are going to registration for Teams events.Then follow the Example :
Full Name : Suman Khoteja, Sham kala, krishn ram Tunba. rosahn koju, Sanjaya Manadhar, Jwala Awal, Dajan Sandha, Rajan Awal, Shiva Awal
Code (CRN/LN/SN) : 700641,700642, 700643, 70068, 70069 , 700650, 700641, 700641, 700655 (I.D. Full Roll No.) (रोल नं. अनिवाय पुरा लेख्नु पर्ने छ । पुरा रोल नं. नराखी नाम दर्ता गर्दा वा नाम र रोल नं. दुवै नमिले यक्त नाम websize ले आफै delete गर्ने भएकोले नाम र id रोल नं. मिलाएर लेख्न अनुरोघ गर्दछ । )
Contact No : Team Captain Contact NO. (94145845
-- SELECT DEPT -- Civil Engineering Computer Engineering Electrical Engineering Science and Humanities College Administration
-- SELECT SEM -- I II III IV V VI VII VIII Study Completed --
Other Events Table Tennis(टेबल-टेनिस) Students Boys' Singles –2076 कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Girls' Singles –2076 कसिमला पाँय (kasimalaa Paanya) Students Boys' Singles –2076 Futsal Girls' Team Event –2076 Futsal Boys' Team Event –2076
तिहार (स्वन्ती नखा: )को बिदा हुनेबारे सूचना ! 12th November, 2020 @01:11 PM 594
नि:शुल्क अनलाइन डाटा प्रदान गरिनेबारे सुचना ! 4th November, 2020 @12:11 PM 543
दशैं बिदा बारे । सूचना 20th October, 2020 @11:10 AM 475